Muummeen Ministiraa Abiy Ahmed Marii Booranaa fi Gujii waliin taa’an irratti maal jedhan?
Amajjii 07, 2020
Bulchaa Booranaa Guyyoo Galgaloo,MM Abiy Ahmedii fi I/P/M/N/O Shimellis Addunyaa(marii Booranaa,Yaaballoo)
Muummeen Ministiraa Abiy Ahmed Marii Booranaa fi Gujii waan hedduu wal mari'atan
Ministrirri Muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed kibba Oromiyaatti jiraattota godina Booranaa fi Gujii waliin marii gaggeessanii jiru.
Daawwannaa isaanii kana Itti Aanaa Pirezdentii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimellis Abdiisaa waliin ka taasisan yoo ta’an, waltajjii marii godinaalee lameenirratti gaaffii hirmaattonni kaasaniif deebii keennanii jiru.
Ganama kaleessaati Muummeen Ministiraa itiyoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi Pirezdentii Itti aanaan naannoo Oromiyaa Shiimellis Abdiisaa jiraattota kibba Oromiyaa godina lamaa waliin maree kan gaggeessan.
Mareen isaanii jalqabaa Godina Booranaa magaalaa Yaa’aballoorratti ka jalqabe yoo tahu, ummatni godinichaa fi angawootni bulchiinsa gadiinaas irratti hirmaatanii jiru.
Maree kanirratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni booranaa qaba jedhan mummee ministiraa fi obbo Shiimellis gaafachuu wal gahii kanirratti ka hirmaatan obbo Hajii Abdullaahii VOA’tti himanii jiru.
Haj Abdullaahiin godinni booranaa bu’uraalee misoomaan hanqinna waan qabuuf irra deddeebiin sana gaafanne jedhan.
Dabalatas, daandii Iddi Lolaarraa gara solooloo geessu haarawi akka bahu, gama nageenyaan ammoo, walitti bu’iinsi gosaa naannoo godina booranaa fi daangaarratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu wal gayii kana gubbaatti mariyatameera jedhan.
Gaaffin dirree xiyyaaraa godina booranaatti ijaaramuu male, rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddoo mareeti.
Aab Guyyoo galgaloo bulchaa godina Booranaati. Gaaffii wal gahii kana gubbaatti gaggeeffamerratti ka’eef muummeen ministiraa deebii kennuu himu.
Godinalee Oromiyaa keessaa rakkoo daangaatiin kan miidhaan waggoota hedduuf irra dhaqqabaa ture tokko Godina Booranaati, keessumaa wal falmii magaala mooyyalee fi godina Daawwaarra gaaffii jiruuf muummeen ministiraa deebii kennan jira.
Dhimmi kaani ka godinni Booranaa Negeelle Booranaarratti qabudha. Hirmaattonni fi jaarroleen wal gahii kanarratti argaman Ardaan jilaa booranni Nageellee qabuu waliin wal qabatee gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodamuufillee gaafatuullee Haj Abdullaahiin dubbatanii jiran.
Aab Guyyoo galgaloo bulchaan godina booranaa muummeen ministiraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoorratti hundaayee deebii malu argataa jechuun dubbatanii jiru.
Giddu galli Aadaa godina booranaas maree kanarratti ka’ee muummeen ministiraa baasii ijaarsa galma kanaa gurgurtaa kitaabaa koorraa aragdhuun nan deeggara jechaan dubbataniiru.
Muummeen Ministiraa Abiy Ahmed sana booda gara Gujii lixaa imaluun jiraattota waliin Bulee Horaatti maree gaggeessaniiru.
Achitti jiraattonni rakkoo bu’uraalee misoomaa qabanii fi dhimma nagaeenyaa ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo tahu; deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf male ka biyyattiin yaadaa qabdu keessaa lama godina Gujii keessatti kan ijaaramu ta’uu himanii dhimma nageenyaan wal qabatee garuu ummatni gahee mataa isaa bahuu akka qabu dhaamani.